PressReader - Isolezwe: 2018-09-14 - Intokazi izojaha okokuqala
Intokazi izojaha okokuqala
Isolezwe - 2018-09-14 - EZEZIMOTO - ZWELAKHE NGCOBO
KUSUKELA iNingizimu Afrika isabuswa uhulumeni wobandlululo ukujahana ngezinqola bekuyinto eyenziwa abafana hhayi amantombazane ngoba lo mdlalo ubuyingozi futhi kuyichilo ukuthi intombazane ingashiya ukupheka iyobamdibi nabafana.
Abafana abebezihlanganisa nawo bebebonakala ngemihuzuko nokuba zibazibazi ngenxa yokuthi izinqola abebejahana ngazo benzingenamabhreki njengezimoto zesimanje ezakhiwa koGermany naseFrance.
Muva nje izinto zibukeka sezigaya ngomunye umhlathi kwazise abesifazane yibona asebeyishaya izule imoto, emandulo obekuyinto ebiyivelakancane emphakathini omnyama.
Izintokazi ezimhlophe zona bezikhishwa uvalo lokuba semgwaqweni ngamabhayisikile ngenxa yokuthi abazali bazo bebekwazi ukuzithengela ukuze uma sekufike isikhathi sokuthenga imoto zibe sezingathuki isisinga.
IRed Bull Box Cart Race engeSonto eSandton Drive kulindeleke ukuthi ivule amehlo iphinde igqugquzele isizukulwane sangomuso samantombazane ukuthi kuzofanele sisukume sizithathe singene umkhono nesiphanga emkhakheni wemijaho yezimoto.
Lokhu kuvele engxoxweni ekhethekile le ngosi yeZezimoto ebe nayo nentokazi yaseThabong, eWelkom, uLusanda Hleko ozobe iyibambe okokuqala ngqa kulo mjaho okuzobe kuncintisana abashayeli abangakhokhelwa nabazobe bejahana ngezimoto abazakhele bona nezizobe zidudulwa umoya.
Sebebonke bangu-72 abashayeli abazobe bencintisana kulo mqhudelwano owake wabaseSoweto ngo-2010.
“Siqambe iqembu lethu ngeTeam Gusheshe (BMX) ngenxa yokuthi iyimoto ebisifikisela injabulo sikhohlwe wusizi lwemihla ngemihla. Ngizobe ngiyibambe noskwiza wami uFuzie.
“Sifuna ukukhombisa ukuthi abesifazane akukho abangeke bakwenze okwenziwa abesilisa,” kusho uHleko ofude wagogoda njengomsiki wengqephu.
“Imoto yethu esizobe sijaha ngayo yiGusheshe, okuyindlela yokuziqhenya nesiqhakambisa ngayo iBMW 325i obekuthi uma iqhamuka eKasi lami siyeke konke esikwenzayo ngoba besijabulela lowo osuke ehamba ngayo ngoba besikholelwa ekutheni usezintweni.
“IGusheshe kithi beliletha intokozo besingalimatanisa nobutsotsi lapho kufanele kuvalwe iminyango uma lizodlula.”
Kwezinye izindawo ezakhele iNingizimu Afrika njengaseKapa, Gauteng naseThekwini, iGusheshe yimoto okushaywa ngayo isdudla kuqhume imikikizo namakhwela kujatshulelwa labo abasuke bekwebha ithayi.
Lo mjaho onikeza abashayeli abangakakhokhelwa nabazakhela bona izinqola abajaha ngazo usezingeni lomhlaba kwazise iRed Bull isiwujikizelise emazweni angaphezulu kwa100. Owokuqala ubeseBrussels ngo-2000. Eminye isike yabanjelwa eRome, e-Italy, eSofia, eBulgaria, eCincinnati, e-Ohio naseLisbon ePortugal, Helsinki, St. Louis, Jamaica naseAustralia.
ULUSANDA Hleko ozongena emlandweni eqhoqhobele inqola yakhe ebizwa ngeGusheshe kwiRed Bull Box Cart Race eseSandton ngeSonto Isithombe: SITHUNYELWE